Sisobishini isitolo sakwa-H&M | isiZulu
Sisobishini isitolo sakwa-H&M
Uma ubheka indlela izinto ezenzeka ngayo ezweni sakhile, ngabe ukucwasa ngokwebala kuyoke kuphele?
Iyinkinga indaba yokucwasana ezinkundleni zokuxhumana
Abafundi baseThekwini banikwe izipho egqugquzela ukucwasana
Johannesburg - Isitolo sezimpahla zokugqoka zabesilisa, abesifazane nezingane, iH&M kubikwa ukuthi ngeke isayidayisa impahla yayo enokucwasa, kuleli.
Isikhangiso esisabalale kwi-internet esitshengisa ingane yomuntu omnyama igqoke isikibha esinombhalo ofundeka kanje "Coolest Monkey in the Jungle" yikho okususe lo msindo.
Lesi sikhangiso sibonakala sengathi sivela emahhovisini esitolo esise-Europe, njengoba imali yesikibha ibhalwe ngoPondo.
Sekube nezicelo zokuba kudutshwe le nkampani.
IDaily Sun ixhumane nabakwa-H&M SA mayelana nalolu daba, base beyaxolisa.
"Siyaxolisa kakhulu ngokudelela amakhasimende ngesithombe sengane egqoke isikibha esinombhalo ongehli kahle esishicilelwe ezinkundleni ezimbalwa kwi-internet.
"Lesi sithombe sesisusiwe kuzo zonke izinkundla ze-internet kanti impahla yona angeke idayiswe eNingizimu Afrika," kusho u-Amelia May-Woustra, okhulumela abakwa-H&M SA.
— Volkan ?? (@vulkaanrots) January 8, 2018